के पेरिस सुरक्षित छ? | सडकको लागि एक युगल
डिसेम्बर 27, 2018 / एक टिप्पणी छोड
केही वर्ष अघि, ट्रेसीले ब्लग पोष्टको बारेमा लेखे पेरिसमा हाम्रो अनुभव त्यो थियो, समय समयमा धेरै ब्याकलाश संग भेट भयो। त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईरहेकी थिईन। उनीहरुसँग भेटघाट गरेकी थिईन। उनीहरुसँग भेटघाट गरेकी छिन्। खुसीसाथ पर्याप्त, पेरिसको सुरक्षामा सँधै साँच्चै घृणा गर्नुभएन पेरिसियन - वास्तवमा यो लेख कुन शहरको बन्यो को निष्पक्ष प्रतिनिधित्वको रूपमा लेख देख्यो।
त्यसैले, अहिले विश्वव्यापि रूपमा मान्यता प्राप्तको बीचमा gilet jaune आन्दोलन जुन पेरिसमा सुरू भएको छ र त्यस पछि युरोपभरि फैलिएको छ, हामी वास्तवमा आफैले आफैलाई सोध्दछौं, "सुन्नुहोस्, म जान्दछु पेरिस के यो हुन के होईन, तर यो अझै पनि पेरिस, ठीक छ? पेरिस सुरक्षित छ? के म त्यहाँ जान्छु? "
चाहे पेरिस भ्रमण गर्न सुरक्षित छ कि प्रश्न, अन्य शब्दहरुमा, अब वर्जि छैन।
यो लेख पहिलोबाट फरक छ किनकी हामी प्रश्नको उद्देश्य उद्देश्यमा बढी फोकस गर्न चाहन्छौं - पेरिस सुरक्षित छ? जब पहिलो हाम्रो अनुभवको एक सिंहासन थियो (साथ नै हामी धेरै जना अनुभवहरुका अनुभवहरु), यो पनी औसत पर्यटक को लागि सुरक्षित छ वा पेरिस सुरक्षित वा जवाफ दिने प्रयास हो।
के is "सुरक्षित"?
परिभाषित गर्न वा चाहे पेरिस एक सुरक्षित स्थान भेट्न हामी भेट्न साँच्चै अर्को प्रश्नको जवाफ हो। पेरिस, वा त्यस विषयमा कुनै पनि शहर हो, पर्याप्त आरामदायक यात्राको लागि सुरक्षित छ?
सत्य भनेको हो, धेरै मानिसहरू मात्र जवाफको रूपमा सुरक्षाको बारेमा सोच्न सक्छन्, "यदि म त्यहाँ जान्छु, म लुटिएको बिना एक टुक्रामा फर्केर आउनेछु?" यदि यो प्रश्न तपाईं वास्तवमा जवाफ जान्नुहुन्छ भने, हामी सम्भवत त्यो, हो, तिमी हुनेछौ सम्भवतः पेरिस भ्रमण गर्नुहोस् र तपाईंको सामान र जीवित संग फिर्ता आउनुहोस्।
शब्दलाई ध्यान दिनुहोस् सम्भवतः.
सगरमाथाको बिरोधमा एक जनाको मृत्यु भएको छ। मृतकको मृत्यु भएको छ। प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले जनाएको छ। थाहा पाईएको छ कि निम्न मध्ये कुनै एक अनुभव भएको छ:
व्यक्तिगत वस्तु वा सामानको चोरी (वा चोरीको प्रयास)
वास्तविक शारीरिक हानि
सत्यलाई भनिएको छ, हामीले शहरमा हाम्रो पहिलो आठ घण्टामा सबै पाँच जना अनुभव गरेका छौं। हामी हालैमा फर्के पेरिसको नोभेम्बरमा, केहि कुरा देख्न खोजेको छ जसले हामीलाई भावनालाई अघिल्लो पटक गलत बनाएको हुन सक्छ, तर यसको सट्टा हाम्रो विश्वासमा पुष्टि भएको छ कि पेरिस निश्चित रूपमा होइन आरामदायक हाम्रो भ्रमण गर्न को लागी।
अब, यहाँ कहाँ छ caveats सुरु - धेरै भन्नेछ कि वास्तव मा पेरिस मा एक महान समय छ, तपाईं साना तिमाहियों मा, आफ्नो आकर्षण को आकर्षण देखि दूर छ, तर यो वास्तव मा 100% के तपाईं चाहानुहुन्छ जब तपाईं धेरै शहर हेर्न यात्रा गर्नुहुन्छ?
हामीले पियाजा नेभिनाबाट बच्न पर्थ्यो रोम । न त हामीले वेस्टमिन्स्टरबाट बचाउन पर्थ्यो लन्डन या प्राग मा चार्ल्स ब्रिज। त्यसोभए, किन धेरै मानिसहरू पेरिसमा सबै मानिसहरूबाट जोगिन सल्लाह दिन्छन चाहनुहुन्छ हेर्न?
वास्तवमा, पेरिसले कम्तीमा ती शहरहरु भन्दा धेरै खतरनाक प्रभावलाई रोक्छ। सीडी गतिविधि केवल उच्चतम पर्यटक गतिविधिको ती क्षेत्रहरूमा सुरू हुन्छ, त्यसपछि शहर भरमा बनी औंलाहरु जस्तै फैलाउँछ। यदि सुरक्षा तपाईं यात्रा गर्दा सान्त्वनाको स्तर र डरलाग्दो डर हो, त्यहाँ पेरिसमा सुरक्षित महसुस गर्ने एक राम्रो मौका हो।
यदि सोध्नु वा पेरिस सुरक्षित छ भने सोध्नु हो भने, यदि तपाईं वास्तवमा बेग्लै हुनेछ भने सोध्नु भनेको एउटा कठिन प्रश्न हो भन्ने जवाफ हो, र विचारको सट्टा तथ्याङ्कको दायरामा एक राम्रो बायाँ।
Ordino, Andorre बाट Laurent Bourrelly [X द्वारा 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], विकिपीडिया को माध्यम ले
त्यहाँ पेरिसमा सुरक्षा चिन्ताको बारेमा लिखित जानकारीको एक बढ्दो मात्रा भर्खरै केहि वर्ष भन्दा बढी छ, वा Bataclan मा घटनाहरु को पछि। वास्तवमा, धेरै अनुसार, पेरिस चुपचाप केही समयसम्म यूरोपको सबैभन्दा खतरनाक प्रमुख शहर बनिरहेको छ।
थिओडोर डेल्रीमिल 2002 मा लेखियो पेरिसको गरिबीको बढ्दो समस्याहरू, मध्य वर्गको उन्मूलन, र पेरिसमा दशकौंका लागि सुत्न सक्ने चुपचाप समस्या। उनले पेरिसको अपराध महामारीको लेखे, एक पटक पछि-alleied सम्म सीमित, त्यो दिनको उजागरमा अब स्पष्ट थियो। यूके सहित भरपूर युरोप, प्रकाशन पेरिस ए पर्यटन "नजानु" 2017 बाट।
अन्य राज्य द्वारा जारी वा सम्मानित यात्रा सुरक्षा वेबसाइटहरू हालको सुरक्षा अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुहोस् लगातार "जोखिम" शहरको रूपमा सूचीबद्ध पेरिस रहेको छ - शहरमा गिरोह-सम्बन्धी अपराधमा वृद्धिको साथ धेरै गर्न को लागी (जो बारेमा प्रतिनिधित्व गर्दछ पुरा गरी gang-related activity of 85% देश)। अधिकांश चिन्ता केन्द्रित हिंसक अपराध (कम से कम जोखिम मा अधिक भन्दा कम मानिन्छ) को आसपास कम छ, र विभिन्न घोटाले र पिक-जेबिंग को आसपास अधिक - जो युरोपेली कैपिटलहरु को बीच मा उच्चतम स्तर को बीच मा रहीं।
यो बुझ्न, यो पनि नोट गर्न सार्थक छ कि पेरिसमा धेरै अपराधहरूले विभिन्न कारणहरूको लागि अपरिवर्तित हुदैन। पहिलो, संयुक्त राज्य अमेरिका मा 13 को तुलनामा आपराधिक जिम्मेवारीको उमेर6हो। यो 8 र 12 उमेरका बच्चाहरु द्वारा धेरै व्यवस्थित घोटाला र pickpocketing अपरेशन कारण किन कारण यो भाग हो। पर्याप्त बस राखिएको छ, यी बच्चाहरूलाई एक क्षणको लागि हिरासतमा राख्न सकिन्छ, तर पक्राउको माध्यमबाट "रोकिएको" छैन, र तिनीहरूका गतिविधिहरूमा फर्किन चाँडै रिलीज (मिनेट वा केही घण्टा भित्र)।
हिंसात्मक अपराध प्रायः पेरिस भित्र निश्चित सङ्कलन गर्न पुनः उत्प्रेरित गरिन्छ। हामी सल्लाह पूर्णतया (यदि सम्भव भए) लेस हिल, चेटलेट, गियर डाउ नर्ड, स्टेलिङग्राद र राउरबाट जोगिन सल्लाह दिन्छु - र उनीहरु लाई पूर्णतया ती क्षेत्रहरु लाई आफ्नो एक्सपोजर लाई सीमित गर्न सल्लाह दिन्छु। यी डाइङियर, शहर भित्रको उज्यालो क्षेत्रहरू र अत्याधिक हिंसाका क्षेत्रहरू छन्। उस्तै पेरिसको धेरै क्षेत्रहरूको बारेमा पनि भन्न सकिन्छ।
यो एकदम महत्वपूर्ण छ, चाहे तपाईं पेरिसमा हुनुहुन्छ भने कम प्रोफाईल राख्न र केहि "खडा" खारेज गर्न को लागी। कुनै पनि धार्मिक वा राजनैतिक रुपमा पूर्णतया टाढा रहनु पर्दछ, साथसाथै कुनैपनि प्रकारका देखिने गहनाहरू।
पेरिस भित्रको पर्यटक आकर्षण आक्रामक छनौट-जेबिंग, चोरी र लुटको लागि प्रायः प्रायः स्थान हुन्। यो एफिल टवर वरपर यति खराब भएको छ, जुन कामदारले प्रसिद्ध स्मारकमा हड्ताल गरेको छ धेरै अवसरहरूमा असुरक्षित कार्यविधिको अवस्थालाई चिन्ताको कारणले गर्दा क्षेत्रमा अपराधको फैलिएको छ। नतिजाको रूपमा, शहरले पर्यटकलाई थप सुरक्षित महसुस गर्न मद्दत पुर्याउन पहलहरू गरेको छ, जस्तै थप गर्ने यो पछिल्लो गर्मीमा पेरिसको सडकमा 5,000 पुलिस बल पर्यटकहरु विरुद्ध अपराध को तीव्र फैलाव को हिसाब गर्न को लागी।
यो शहर (र देश) को लागि यो आवश्यक कदम हो जसले हालैको वर्षमा आतंकवाद, आर्थिक कठिनाइहरू, र बढ्दो खर्चको कारण पर्यटनको धम्की देख्छ। वास्तवमा, यो अनुमान लगाइएको छ कि पेरिस लगभग हेरिरहेको छ 1.5 लाख कम पर्यटकहरू प्रति वर्ष, 2016 पछि हरेक वर्ष यी कारकहरूका कारण।
कसरी पेरिसमा सुरक्षित रहनुहोस्
त्यहाँ रहनु र जारी राख्नुहोस्, तथापि, हरेक दिन पेरिसमा आउने पर्यटकहरू उत्कृष्ट अनुभव छ - पर्याप्त छ कि हाम्रो अघिल्लो आलोचना केही सुन्दर दृढ असहमतिसँग भेटिए। त्यसोभए, हामी त्यहाँ भन्न सक्छौं no पेरिसमा रिडिमिङ मान? होइन, हामी त्यो भन्न सक्दैनौं। मैले उनीहरूलाई भेट्टाएका मानिसहरूलाई थाहा पाउँछु, यद्यपि ती व्यक्तिहरूले कम्तीमा सात वा आठ वर्ष पहिले भ्रमण गरे। हाम्रो लागि, हामीसँग वास्तवमा यस बिन्दुमा फिर्ता जाने कुनै पनि इच्छा छैन।
पर्यटक र यात्री प्रकृति द्वारा उत्सुक छन्, र सत्य यो छ कि तपाईं मध्ये धेरै पढ्ने यो सोचने जाँदै छन्, "अँ, म मेरो शर्त हट्नेछ। म लुभ्रे / आर्च डी ट्राइम्पोम / मन्टमार्ट्रे, आदि देख्न चाहन्छु ... हामीले सुनेका छौं हामी पहिले खतरनाक थियो, र कुनै पनि पनि भयो। वास्तवमा, हामी शायद हामीले धेरै सुनेका अन्य ठाउँमा जान्छौं खतरनाक छ।
यात्रीहरू जहाँ जान जान्छन्, र कहिलेकाहिँ यसले ठाउँहरू जुन खतरनाक छ।
त्यसोभए तपाईं कसरी पेरिसमा सुरक्षित रहन सक्नुहुन्छ?
सुरु गर्ने हरु को लागि, हामीले रातको माथि उल्लेखित क्षेत्रहरूबाट टाढा सबै कुरा गरौं। त्यहाँबाट बाहिर आउन सक्ने राम्रो छ, र अधिक आबादी वाला क्षेत्रहरू हेर्न को लागी अधिक छ कि तपाईले सुरक्षित राख्नुहुनेछ।
रातमा भारी आबादी र राम्ररी इलाकामा टाँस्नुहोस्। यो राम्रो छ, यो, किनकि यो सौभाग्यले धेरै ठाउँहरू समावेश गर्दछ जहाँ तपाइँ शायद कुनैपनि समयमा समय खर्च गर्न चाहानुहुन्छ। यो मुख्यतया शहरको केन्द्रमा रहन समावेश गर्न जाँदैछ, र तपाईलाई साँच्चै साँच्चिकै हुनुपर्छ पेरिसको बाह्य बेल्टबाट जोगिन विचार गर्नुहोस् पुरा तरिकाले।
यदि तपाईं वरपर हिड्नु भएको छ भने, पर्यटक जस्तो नदेखाउनुहोस्। केहि स्मार्ट चीजहरू आफैलाई मद्दत गर्न जस्तै केहि महंगी क्यामेराहरू, स्मार्टफोनहरू, वा GoPros को आवरण जस्ता।
यहाँ एउटा चीज हो जुन तपाइँ पेरिसमा गर्न चाहनुहुन्छ: WEAR ए पैसा बेल्ट!
त्यसैले, के पैसा बेल्ट छ? बसोबास गर्नुहोस्, यो एक पतली बेल्ट हो जुन तपाईंको लुगाफाँट भित्र जान्छ र तपाईंको शरीर वरिपरि लुकेको हुन्छ। चोरहरू यो हेर्न सक्दैनन्, र तिनीहरू तपाईंको आईडीहरू, पासपोर्ट, पैसा, र होटल कोठा कुञ्जी फिट गर्नको लागि पर्याप्त ठूला हुन्छन् - जसमा तपाईसँग तपाईंसँग धेरै धेरै कुरा समावेश गर्नुपर्छ।
हामीले प्रयोग गर्ने एउटा सुपर सख्त छकपडा, टिकाऊ, र केवल 15 रकम मात्र खर्च गर्न लगभग असम्भव छ अमेजनमा। हामी सिफारिस गर्नेछौं कि यो पेरिसको यात्रा मात्र होइन, तर साँच्चै कहीं पनि यात्रा गरिरहेको छ!
तपाईंको सुरक्षित राख्न मद्दत गर्न यहाँ अर्को सरल चीज हो - तपाईंको पासपोर्टको प्रतिलिपि बनाउनुहोस् र यसलाई तपाईंको होटलको कोठामा छोड्नुहोस्। यदि केहि हुन्छ भने तपाइँले पिक-जेब (जुन साँच्चै पैसा बेल्टको साथ हुनुपर्दैन) प्राप्त गर्नुहुनेछ, तपाईसँग तपाइँको पासपोर्ट जानकारीको एक प्रतिलिपि पाउनु पर्छ जुन तपाईले विमानमा पाउने क्षमता र घर फिर्ता लिनुहुनेछ।
यहाँ धेरै ठूलो छ। कुनै पनि कारणको लागि जुन तपाईंकहाँ आउनु भएको कुरा नगर्नुहोस्। यदि तिनीहरू दिशाका लागि सोधिरहेका छन् भने, यो शायद एक घोटाला हो र तपाइँको वालेटमा पुग्ने तरिका हो। यदि यो तपाइँ कसैलाई एक मागमा साइन इन गर्न सोध्नुहुन्छ, वा केवल अनियमित प्रश्न सोध्न रोक्न, यो पनि हो। त्यहाँ ठाउँहरू जहाँ सडकमा रोकिन्छन् र तपाईं अजनबी द्वारा एक प्रश्न सोध्नुभयो, तर दुर्भाग्यसुकै पेरिस उनीहरु मध्ये एक होइनन्।
अन्तमा, र यो वास्तवमा तपाईंको अपेक्षाहरूको रक्षा गर्न हो, तर सफा नगरको आशा गर्नुहुन्न। पेरिसमा रमाइलो गर्न अझै धेरै छ, तर यो चलचित्रमा छ जस्तो छैन। अधिकांश सडकहरू गहिरो छन्। त्यहाँ एक खराब बेघर समस्या छ। धेरै क्षेत्रहरू सामान्यतया अनावश्यक रूपमा हेर्छन्, जसले मात्र उनीहरूलाई कसरी असुरक्षित पार्छ भन्छन्। यदि तपाईं आशा गर्नुहुन्छ कि तपाईं यस चीजको सामान हेर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो अपेक्षाहरूलाई स्वाद गर्नुहुनेछ।
यदि तपाईं यी चीजहरू गर्न र बुद्धिमानी यात्रा गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भने, म साँच्चै सोच्दैन कि तपाईसँग समग्र समस्या हुनेछ पेरिसमा सुरक्षित रहन। त्यहाँ केही चीजहरू छन् जुन क्याबहरू लिने र मेट्रो लिने जुन बिना बोल्दै जान्छ, तर समग्रमा, तपाईंको समयमा प्रायः दिनभरि घुमाउनुहोस् र रातमा कम अपराधको साथ राम्रो क्षेत्रमा रहनुहोस्। त्यहाँ हो केहि।
यो सबैलाई यसो भनिएको छ, कुन कुरा थाहा छ कि पेरिस छ महिनामा कस्तो देखिन्छ? के पहेंलो भित्ताले विरोध गर्दा शहर असम्भव गर्न असम्भव बनाउनेछ, किनकि केहि अहिले यो हुँदा जब यो सबै चलिरहेको छ? हुनसक्छ। तर, त्यहाँ पनि केही राम्रो आउन सक्छ भन्ने सम्भावना पनि छ, र पेरिसमा सामान्य जीवनशैली हरेक दिन पेरिसियनहरू आफैं र अधिक शहरका लागि बढी चाहनाको परिणामस्वरूप सुधार गर्नेछ।
त्यो हाम्रो आशा हो। हामी सबैको सपनाको इष्टिलिक पेरिसमा जान चाहानुहुन्छ, र आशा छ कि एक दिन एक वास्तविकता हो, तर अहिले त्यहाँ धेरै धेरै अन्य ठाउँहरू छन् (फ्रान्सेली पनि) जुन सजिलै आनन्दित हुन सक्छ।
त्यसैले, पेरिस सुरक्षित छ? हामी यति सोच्दैनौं, तर तपाईं सही सावधानी लिनु हुन्छ र चाँडै यात्रा गर्न सहमत हुनुहुन्न। अन्ततः, यो निर्णय गर्नको लागी हो!
PARIS को लागि अप्रिल ट्रायल रिजर्भेसन
पेरिस नक्शा - यो काम नक्साको साथ पेरिस वरिपरी तपाईंको भ्रमण योजना बनाउनुहोस्
Expedia.com - पेरिसमा सस्ती आवास वा बन्डल उडानहरू र होटल बुक गर्नुहोस्।
सिफारिस गरिएको गाइडबुक: लोनली ग्रह पेरिस
सुझाव गरिएको पढाइ: एक चलने योग्य उत्सव: पुनर्स्थापित संस्करण - अर्नेस्ट हेमिंगवे
श्रेणी: युरोप, फ्रान्स, यात्रा योजना टैग: युरोप, फ्रान्स, पेरिस, सुरक्षा
← जोडीहरूका लागि मियामीमा रोमान्टिक गतिविधिहरू
ढिलो कुकर बोउफ बोर्गुइनन →